Isisekelo columnar futhi inqwaba
Ukubalwa materials pier isisekelo
Cacisa uhlobo ikholomu
uhlobo 1 uhlobo 2
uhlobo 3 uhlobo 4
Cacisa izilinganiso izinsika isisekelo
Ukuphakama the base A
Ukuphakama ikholomu H
Ukuqinisa izinduku hlu ARM1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Cacisa izilinganiso isisekelo
Inani izinsika X1
Inani izinsika Y1
Wezinsika ngaphansi yonke indlu S
Cacisa izilinganiso grillage
Inani imigqa of zalapho ARM2 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
I ububanzi we valve ARMD
Cement per imitha cubic ngokhonkolo
usimende (isikhwama of kilograms 50 per)
Nokufakwa (1 ton)
Khetha uhlobo imibhobho yensimbi yokwakha izisekelo
Lokhu kungase kube izinsika base yindilinga noma aboncamane. Futhi round noma aboncamane main ingxenye.
B - The width noma ubukhulu.
H - Ukuphakama main okuyingxenye.
A - Ukuphakama ikholomu. Uma inqwaba ngaphandle isizathu ke musa ucacise usayizi.
D - The width noma ububanzi of the base.
D1 - The ubude base wamaqhuqhuva.
B1 - Ububanzi for a insika aboncamane.
Uma yindilinga cross-section, lezi izilinganiso azisetshenziswa kulesi sibalo.
Ubukhulu pier isisekelo
X - The Ububanzi isisekelo.
Y - Ubude isisekelo.
X1 - Isibalo columns ububanzi, kuhlanganise izinsika ezisemagumbini.
Y1 - Isibalo izigxobo ubude, kuhlanganise into esiyibonisa ngezikhathi ezithile izinsika.
S - Uma kuhloliwe, kuyoba ibalwe columns, wahlela ngokulinganayo ngaphansi yonke indlu. Uma kungenjalo, kuphela azungezwe izigxobo isisekelo.
E - The Ububanzi isisekelo isihlenga.
F - Ukuphakama cap inqwaba.
Uma ekubalweni grillage Monolithic hhayi ezidingekayo, musa ucacise usayizi.
ARM1 - Inani imigoqo ukuqinisa kwelinye ikholomu.
ARM2 - Inani imigqa in the nokufakwa Ribbon grillage.
ARMD - I ububanzi we valve. Njalo kukhonjisiwe kwangu.
Uma ukugcizelela ayidingekile, usethe amagugu 0.
Cacisa nenani kasimende yokwakha elilodwa cubic ngokhonkolo. In kilograms.
Khetha olinganise for zokukhiqiza ukhonkolo, ngesisindo. Lezi idatha zihlukile esimweni ngasinye.
Bathi kuxhomeke brand of kasimende, nechobozekile ezinobukhulu itshe nobuchwepheshe ukwakhiwa. Cacisa abaphakeli babo zokwakha.
Ukuze abale izindleko ezilinganiselwa zokwakha, ucacise amanani abo.
Ngenxa yalokho, lo hlelo ngeke ukubala ngokuzenzakalelayo:
Ibanga phakathi yinqwaba isisekelo futhi nenombolo yabo.
Umthamo Concrete for ikholomu, ngokwehlukana phezulu kanye phansi.
Inani ukhonkolo isisekelo isihlenga.
Ubude nesisindo inani elidingekayo valve.
Izindleko zokwakha idivayisi columnar Monolithic noma inqwaba isisekelo kanye namanzi.
Imidwebo uyonika a umqondo jikelele futhi kuzosiza design inqwaba izisekelo.
Ukuze zokugeza nezindlu ngaphandle ezindlini, emakhaya enezindonga ukukhanya kanye nezindlu ngezitini, lapho ukusebenzisa isisekelo strip akuyona ukonga, ngokuvamile esetshenziselwa pier isisekelo. Ekubalweni Yakhe indaba isikhathi, kodwa Uhlelo lwethu izilinganiso ngeke kuthathe isikhathi sakho esiningi. Odinga ukukwenza is ugcwalise emasimini ezifanele ngokusho imiyalelo, kanye uzothola ulwazi mayelana edingekayo ukuze zokwakha, ukuthola inombolo yabo futhi Kubiza.
Pier isisekelo ine uhlobo columns, lapho ehlangana usebenzisa grillage. Lezi zingongolo zitholakala kwi amakhona isakhiwo esizayo, kanye ezimpambanweni zomgwaqo izindonga, ngaphansi abathwali noma izindonga nje esindayo, imishayo futhi izakhiwo esibucayi. Kulezo zindawo lapho umthwalo okusezingeni ngokukhethekile. Rostwerk zokuthuthukisa isisekelo pier, futhi unombono ibhuloho kwagcizelela phakathi kwezinsika.
Akufanele lisetshenziswe kuphi pier isisekelo
Faka pier isisekelo is hhayi Kunconywa lapho kukhona nenhlabathi ezithathekayo noma ezibuthakathaka ezifana Peat noma amanzi-eligcwele nenhlabathi clayey. Akubalulekile ukusebenzisa isisekelo lolu hlobo futhi ezindaweni lapho kukhona iconsi ebukhali mpo.
Pier isisekelo has a number of izinzuzo ezenza kube ikhambi elilungile ekwakhiweni kwendlu yangasese. Kuyinto ezishibhile tape noma setshe isisekelo, ukusetshenziswa ukonga ngaphezulu zokwakha kanye nezindleko zokwakha yayo, unikeza ukuncipha kancane futhi kunciphisa endaweni ingqikithi engaphansi. Lokhu isisekelo ngempumelelo umelana imiphumela okubhubhisa isithwathwa Isikhukhula samakamela siyokusibekela emhlabathini.
Kuye isisindo kanye nenombolo ye izitezi House kufanele kukhethwe futhi izinto isisekelo. Leli tshe, isitini, ukhonkolo kanye ukhonkolo kwagcizelela. Ngokusho uhlobo impahla ukhethwa kanye ubuncani esiphambanweni esigabeni izinsika. Ngakho, ngoba izikhala ukhonkolo kwesigaba usayizi akufanele kube ngaphansi kuka-400 mm for wokwakha hhayi ngaphansi kuka-600 mm for wokwakha 380 mm uma kuba ngaphezu eliphansi 250 mm, uma ubuchwepheshe isetshenziswa ukugqoka Zabirko.
Ngaphambi kokuba uqale ukwakhiwa, kudingeka sithole inhlabathi okokuqandisa, uhlobo kanye nendlela okwakheke ngayo umhlabathi ukujula, uma kudingekile, ukuze ahlele esikhundleni sakhe, futhi indawo komhlaba level ukuhlonza isidingo amanzi kanye ungangenisi amanzi. Ukwakhiwa pier isisekelo kuthatha indawo 9 izigaba ezilandelanayo.
1. Umsebenzi wokulungiselela, okuyizinto zihlanzekile esakhiweni.
2. Ukuze kukhunjulwe le isisekelo lapho izwe ibhalwa ngokuvumelana uhlaka.
3. Ukumba imithombo.
4. Ukufaka formwork for izinsika.
5. Ukufakwa kwe-valve.
6. Ukuthela columns.
7. Ukukhiqizwa isihlenga isisekelo.
8. Ukwakhiwa okuthiwa Zabirko kocingo noma udonga phakathi izikhala.
9. Izinyathelo ukuze ungangenisi amanzi kwesisekelo.
Uma indlu yakhiwa kulesi sizinda ugonyuluka nenhlabathi, awukwazi ukuhlehlisa laqala ukwakha. Uma nalutho isisekelo ebusika, kungaba deform.
Just alayishiwe ukusekela ukhonkolo kufanele axazulule zingakapheli izinsuku ezingama-30. Ngalesi sikhathi, kulayishwa kubo is hhayi Kunconywa.
Ukuze ekwakhekeni ukhonkolo ngokufanele kasimende ezifanele mark M400, futhi njengoba ukugcwalisa owubhuqu encane nesihlabathi indawo.